HOOS U DHAADHAC ↓
Maxaa ugu badan ee aad u xiistay safmarka dartiis – la dabaal daga qoyska iyo asxaabta, qabashada geemamka ama kaliya isku imaatinka? Dhamaanteen waxan oo dhami inay inoosoo noqdaan ayaan doonaynaa.
This Is Our Shot noqonaya #TogetherAgain waxaa weeye barnaamij loogu talo geley inay ku wada banaan baxaan reer Kanada oo waxaa la isku dhiiri gelinayaa in lagu badalo ka maagitaanka talaalka in lagu kalsoonaado si markaa aanu usoo afjari karno safmarka – inaka oo isku duuban.
Si loo noqdo #TogetherAgain, waa in aanu sii wadnaa ilaalinta nafteena, qoysaskeena, iyo bulshadeena. Aynu bilawno qiraalka in la is talaalaa inayna u fududayn dadka qaar sida ay ugu fududahay dadka kale. Waa inaynu dhamaan ka wada shaqaynaa sidii loo xaqiijin lahaa in qof kastaa uu helo xaqiiqada iyo macluumaadka ay u baahan yihiin si loo gaadho go’aan laga warqabo.
This Is Our Shot si ay usoo afjarno safmarka, Kanada gudaheeda
NAGU SOO XIDHMO:
Macluumaadka Talaalka COVID-19
[XXXXX] Talaalka COVID-19 waa laga bixiyay Kanada
Waxaa dhici karta inaad su’aalo ka qabto talaalka. Waxa aanu halkan u joognaa in aanu kugu dhiiri gelino aqoonta aad u baahan yahay si markaa aad u dareemi karto kalsooni ku saabsan qaadashada talaalka iyo in lagaa caawiyo inaad soo afjarto talaalka.
Xaqiiqada oggow. This Is Our Shot to be #TogetherAgain.
Markaa aad diyaar u noqoto inaad qabsato balan…
Guji degmadaada oo waxaa lagu gayn doonaa daaqada balansiga degmadaada. Ama qabo Vaccine Hunters Canada, oo kugu hagi doonaa xarunta talaalka ee dalka oo dhan, oo ay ku jiraan farmasiyadu.
Newfoundland iyo Labrador
[XXXXX] Talaalka COVID-19 waa loo qaybiyay
[XXXXX] Talaalka COVID-19 waa laga bixiyay
Macluumaadka waxaa laga heley Dawlada Kanada
Toos Dawlada Hoose
This Is Our Shot noqonaya #TogetherAgain si toos ah looga baahiyo dawlada hoose kulamada macluumaadka COVID-19.
Guji halkan si aad ugu biirto
Waxa aad soo gudbin kartaa su’aalaha marka hore ama inta lagu jiro madasha.
Munaasabada waxaa lagu qaban doonaa Ingiriisi
WAXAA LAGU HELAYAA LUUQADO BADAN
Sida aad uga qayb geli karto
This Is Our Shot noqonaya #TogetherAgain Olole
Qof kasta ayaa ka qayb geli kara oo marka uu sidaa sameeyo, waxa aad gacan ka gaysanaysaa faafinta fariinta talaalka in safmarka Kanada inuu soo afjari karo.
Is talaal markay gaadho wakhtigaaga.
Waxa aad ka qayb gashaa ololaha #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain adiga oo iibsanaya garan.
Xidho garankaaga marka aad imanayso balantaada talaalka oo bar kaalmadaada nooca talaalka (ama wax) ku saabsan daryeelkaaga.
Waxa aad baraha bulshada soo dhigtaa sawiro ama fiidyaw adiga oo xidhan garankaaga oo muujinaya kaalmada noocaaga, ku taag garee asxaabtaa iyo qoyskaaga oo waxa aad ka dalbataa inay sidaas sameeyaan iyana.
Sidoo kale wadaag wixii kale ee lasoo dhigaya adiga oo isticmaalaya #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain si aad u faafiso.
Dhamaan nidaamyadu waxay ku danbeeyaan Kids Help Phone hay’ad samofal.
Macluumaadka This Is Our Shot noqonaya #TogetherAgain
Hay’ada deegaanka, xirfadlayaasha daryeelka caafimaad ee Kanada iyo shirkada ugu caansan Kanada waxay arkeen baahida loo qabo faafinta fariinta ee ku saabsan amaanka talaalada iyo in lagu badalo ka maagista kalsooni. Waxay sidoo kale ogaadeen wada shaqaynta iyada oo hal koox la yahay, iyada oo hal shay oo la taaban karo lagu dadaalo inay tahay waxa ugu wanaagsan ee lagaga gudbi karo ka maagista talaalka.
Iminka baanarka kaliya ee hoose This Is Our Shot noqonaya #TogetherAgain xirfadlayaasha caafimaadka, shaqaalaha ka shaqaynaya, bulshooyinka deegaanka, shirkadaha Kanada, iyo dalada dadka sida wanaagsan loo yaqaan ee saamayn leh, waxay iminka wakhtigooda siideen iyo khayraadkoodaba sidii ay kalsoonida talaalka ee dadka reer Kanada kor ugu qaadi lahaayeen.
Waxa aanu u mahadnaqaynaa dadka aanu gacan saarka leenahay ee sida wanaagsan gacanta uga gaystay ololaha This Is Our Shot noqonaysa #TogetherAgain: